How to IDM Uninstall & Install (internet download manager ကို Uninstall ပြုလုပ်ပုံနှင့် Full Version install ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်) ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
How to IDM Uninstall & Install (internet download manager ကို Uninstall ပြုလုပ်ပုံနှင့် Full Version install ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်)
Saturday, March 24, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 46 comments
IDM ကို Uninstall လုပ်တာ မရဘူး...
C:/Program file မှာလဲ ဖျက်လို့မရဘူး...
Install လုပ်တာလဲ အဆင်မပြေဘူး...
Serial Key တောင်းနေတယ်.....
ဖြုတ်လဲ မရဘူး တပ်လဲ မရဘူးး......
.....မရဘူးးးး ...... အဆင်မပြေဘူးးးး.........ဖြုတ်မရဘူးးးးးးး.......ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ......????
IDM နဲ့ အဆင်မပြေပေါင်းများစွာတွေ ကြားရနေရတာနဲ့ ဒီနေ့ အပြတ်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်....:P
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေးတွေကို တဆင့်ချင်း ရှင်းပြနေရင် ရှုတ်သွားမှာမို့ Vedio လေးနဲ့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် ...။ တခြား ဖြုတ်မရတဲ့ Program တွေ Software တွေကိုလဲ ဒီနည်းအတိုင်း ဖြုတ်နိုင်ပါတယ် ... ။
( Run box မှာရေးထည့် တဲ့ စာလုံးက regedit ပါ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်..။)
ဒီဗွီဒီယိုလေးကတော့ IDM ကို ဖြုတ်ထုတ် ပုံ လေးပါ...။
စက် Restart ကျသွားမှာပါ ..။ Window ပြန်တတ်လာရင် အောက်က Video လေးထဲက အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားလိုက်ပါ..။
ဒီဗွီယိုလေးကတော့ IDM ကိုပြန် Install ပြီး Full Version ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပုံပါ...။
အပေါ်က Video ထဲက IDM Patch ကတော့ စောစောက တင်ပေးထားတဲ့ IDM v6.11 နောက်ဆုံး Update ထဲက Patch နဲ့ နမူနာ လုပ်ပြထားတာပါ .... Patch တွေက တခု နဲ့ တခု မတူကြသလို အသုံးပြုပုံချင်းလဲ မတူနိုင်ပါဘူး..။ IDM v6.11 Beta + IDM Just Double Click ကို ဒီမှာ ထပ်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။ Just Double Click လေးကတော့ အပေါ်က Video ထဲကလို IDM ကို Uninstall လုပ်ပြီး idm 6.11.exe ဖိုင်လေးကို Click နှစ်ချက် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Full Version လေးဖြစ်သွားမှာပါ...။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်....။ အဆင်မပြေတာ ရှိခဲ့ရင် Facebook Wall ဖြစ်စေ.. Comment မှာဖြစ်စေ C-box မှာဖြစ်စေ တနေရာရာ ကနေပြောသွားနိုင်ပါတယ်..။
IDM ကို ဖြုတ်မရ တပ်မရ Key ရှာရတဲ့ ပြဿနာ များနှင့် ထာဝရ အမြဲ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ...။
27 March 2012 at 06:52 Reply
patch လေးနဲစမ်းလိုရသွားပြီ့ ကျေးဇူးကမ္ဘာလို့ ဘဲ ခေါ်တော.မယ်ဗျာ
14 April 2012 at 13:13 Reply
they asked for Registration, Serial number.
16 April 2012 at 03:54 Reply
lubo601.com ခင်မျာ IDM ကို Serial Number ထည့်တာ အဆင်ပြေပါဘူး အောက်က ဗွီဒီယို လေးထဲကလို Patch ချိုးပေးရမှာပါ...အမြဲတမ်းသုံးနိုင်ဖို့ ကို လွယ်လွယ်လေး သုံးချင်ရင်တော့ ကျနော် အမြဲတမ်း Update ဖြစ်တိုင်း တင်ပေးနေကျ ဖြစ်တဲ့ IDM Just Double Click ကိုပဲ သုံးပါလို့အကြံပြုပါရစေ....:)
17 April 2012 at 22:48 Reply
အစ်ကို IDM ကို ဖြတ်ထုတ်တဲ့ Vedio က ကောင်းကောင်း မမြင်ရဘူး..မသဲကွဲဘူး ဖြစ်နေတော့ အဆင်မပြေဘူး..အစ်ကို ..ကူညီပါဦးနော်..
19 April 2012 at 00:25 Reply
11 July 2012 at 20:33 Reply
maung win Zaw says:
25 September 2012 at 21:48 Reply
IDMဖြုတ်တာအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ်အကူအညီတောင်ချင်လို့Mozila firefox ဖွင့်လို့လဲမရဘူးဖြုတ်လိုလဲမရဘူးဖြစ်နေတယ်အသစ်ထည့်လည်းမ၇ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
26 September 2012 at 00:53 Reply
Revo Uninstaller သုံးပြီး ထုတ်ကြည့်ပါ Uninstaller Label မှာရှိပါတယ် ....Firefox ကို Install လုပ်မရရင် ဒီနေရာကို သွားပါ www.ninite.com ကိုရောက်ရင် Firefox ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်လေးတပ်ပေးပြီး ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ အစိမ်းရောင်နဲ့ Get Installer ကိုနှိပ်ပြီး အဆင့်ဆင့် OK OK Ok ပေးလိုက်ပါ သူ့ဘာသာသူ Install လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ် ... အဆင်ပြေပါစေ...
26 September 2012 at 01:18 Reply
26 September 2012 at 11:40 Reply
အကို အဆင်ပြေပါတယ် ဒါပြီး mozilla အစဖွင့်ပြီး Fb ဝင်တာဒါပြီးပြန်ထွက်တဲ့နေရာမှာ Home ဘေးနားမှာ မျှားမရှိလို log out မပါဘူး"ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကူညီပါဦးဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
25 October 2012 at 20:27 Reply
3 November 2012 at 17:33 Reply
အကို.....IDM v6.11 Beta + IDM Just Double Click ကို ဒေါင်းဖို့ site ကရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်....အဲဒီဖိုင်ကိုဖျက်ထားတယ်လို့ပြောနေတယ်....ကူပေးပါဦး
4 November 2012 at 17:34 Reply
ဒီမှာ နောက်ဆုံးVersion ကိုဒေါင်းယူပါ >>>>> http://winkabarkyaw.blogspot.com/search/label/Internet%20Download%20Manager#
Nyein Ko Hein says:
5 November 2012 at 22:57 Reply
Thanks so much. May know more and more and get success more and more!
18 November 2012 at 20:15 Reply
wow ,..it's work....thz u so much ...
20 November 2012 at 17:51 Reply
video is not too clear to see !
plz post again by picture .
30 November 2012 at 06:58 Reply
Thank u xo much bro!
Fred K.Thet says:
27 January 2013 at 22:12 Reply
Thanks so much Yezin Vet IT group
11 February 2013 at 21:25 Reply
ye thi ha says:
12 February 2013 at 03:33 Reply
idm မရလို.စိတ်ညစ်နေတာ ကျေးဇူးပါ။
sithu mm says:
30 April 2013 at 10:29 Reply
အစ်ကို ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာ IP star သုံးပါတယ်။ password လဲသိတယ်။
ဖုန်းနဲ့လဲချိပ်တာမရဘူး လက်တော့နဲ့လဲချိပ်တာမရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ သိရင်ပြောပြပေးပါ။
30 April 2013 at 10:30 Reply
ထွန်း ထွန်း says:
1 May 2013 at 20:50 Reply
12 May 2013 at 22:53 Reply
Saw Mahu says:
13 May 2013 at 15:04 Reply
Daniyal Alizai says:
31 May 2013 at 21:24 Reply
4 July 2013 at 00:46 Reply
26 July 2013 at 12:30 Reply
31 July 2013 at 11:24 Reply
Kyaw Sein Lin says:
2 August 2013 at 17:58 Reply
Nay Thura says:
17 August 2013 at 22:41 Reply
ni pyin nyar says:
29 October 2013 at 15:08 Reply
ဘယ်လိုပြောရမလဲ လိုချင်တာကို အမောတကောရှာနေတဲ့သူတစ်ဦး (သို့) ပြဿနာတစ်ခုကို အပူအပြင်း ဖြေရှင်းနေရတဲ့သူတစ်ဦး ဒီလိုလူတွေအတွက် ဆန္ဒကိုပြည့်မြောက်စေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သူကိုဆိုရင် အရမ်း(အရမ်း)ကိုကျေးဇူးတင်မိမှာပါ
naing NINE says:
26 November 2013 at 21:36 Reply
26 November 2013 at 21:37 Reply
file not found ပဲပေါ်နေပါတယ်။။
27 December 2013 at 14:13 Reply
thanks you .brother
K Moekyaw says:
2 January 2014 at 03:52 Reply
အစ်ကိုပြောသလိုလုပ်ပါတယ်။uninstallလုပ်ပြီးပြန်လုပ်တော့fate serial ပဲတက်လာတယ်ဖွင့်လို့မ၇ပါ။window7ကvideo အတိုင်းမပေါ်ပါ။download user ထဲမှာidmကိုပြန်installလုပ်တာပဲfate serialပဲပေါ်နေပါတယ်။ကူညီပေးပါ။thanks
mglwin lwin oo says:
5 January 2014 at 08:14 Reply
5 January 2014 at 08:16 Reply
5 February 2014 at 15:30 Reply
ရသွားပြီး bro ရေ thankzzzzz
Swan Thai says:
15 April 2014 at 03:22 Reply
computer format ချတဲ့နည်းလေးသင်ပေးပါလားအကို ပြီးရင် windows အသစ်ပြန်တင်နည်းလေပါ
အရမ်းလေးနေတယ် computer က ကူညီပါနော်
16 May 2014 at 12:24 Reply
အစ်ကိုရေ Mozilla Firefox addons(29.0.1) မှာ
IDM CC 7.3.18(disabled) ဖြစ်နေတော့ Download အသုံးပြုတဲ့ နေရာမှာ
သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါအုံး အစ်ကိုရေ
Olan Bay says:
29 May 2014 at 21:44 Reply
12 November 2014 at 10:03 Reply
18 May 2015 at 20:37 Reply
( စေတနာကိုလေးစားပါတယ် တတ်ပီးနားလည်လွယ်တတ် သူတွေမှမဟုတ်တာကို ရှုက်ရှက်ခတ်ဗွီဒီယိုရယ် ရှင်းပြတာတွေဟာ သဘောပေါက်လွယ်မှမလွယ်တာကို ပေးပီပေါ့ မေးပီပေါ့ (comment )တတန်းကြီးပဲ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မလွယ်ဘူးဆိုတာ တခြားနည်းပညာဆိုဒ်တွေလိုရှင်းမျမရှင်းပဲ သမားတွေမှမဟုတ်တာကို )
10 September 2015 at 21:48 Reply
firefox ကို 40.0.3 တင်ပြီ idm ကို add-ons လုပ်လို့ မရတော့လို့ 
လင်ဖါ.မ်ုနိက် စ၀်မ်ုနိက် says:
17 July 2017 at 22:23 Reply
thank you so much saya who is ceated technology for us.
Android Applications (413)
Android Facebook (63)